Olana ao amin’ny ”Banque de sang” – HJRA : lasa takalon’aina ny marary mila ra | NewsMada
Olana ao amin’ny ”Banque de sang” – HJRA : lasa takalon’aina ny marary mila ra
Hakana 30.000 Ar farafahakeliny amin’ny paosin-dra iray, raha toa ka tsy manana mpanolo ra vonona ny marary. Ampahany kely amin’ny fomba fakam-bola ankolaka ao amin’ny “Banque de sang”, ao amin’ny HJRA izany. Mitokona miady tombontsoa ireo mpiasa. Miezaka mamono afo ny kosa ny mpitantana ny CNTS. Vokany, lasa takalon’aina ny marary mila ra.
Nanambana grevy ireo mpiasa eo anivon’ny Ivontoeram-pirenena misahana ny famindrana sy ny fitahirizan-dra (CNTS), izay fantatry ny maro amin’ny hoe “banque de sang”, etsy amin’ny HJRA Ampefiloha. Araka ny notaterin’ny haino aman-jery omaly, mitaky ny fitantanana mangarahara ao amin’ny CNTS ireo mpiasa, ao ambadiky ny ady tombontsoany manokana. Miezaka mamono afo ireo mpitantana ity ivon-toerana ity, ka namaly ireo mpiasa mitokona. Ny vy rahateo tsy mikitrana irery, satria misy zavatra hafahafa ao matoa tonga amin’ny fifanolanan’ny mpiara-miasa. Tsy mbola misy anefa ny vahaolana naroso, ka lasa takalon’aina hatrany ny marary mila rà.
Gaga, talanjona ary sorena teo anatrehan’ny fitokonana ireo mpanaraka marary ao amin’ny hopitaly HJRA na ireo avy any amin’ny toeram-pitsaboana hafa, mila paosin-dra. Filaharambe ny an’ireo hanolo ra hampiasain’ny marary, miandry ny fandraisana azy ireo. Tsy mivoaka anefa ny paosin-dra ilaina raha tsy voasolo izany.
“Fanaovana tsinontsinona ny marary mihitsy ny an’ity sampandraharaha ity. Fantatr’izy ireo tsara fa eo am-pelatanany ny ain’ny marary mila fandidiana, satria tsy afaka ny handidy ny mpitsabo raha tsy efa vonona ny paosin-dra”, hoy ny nambaran’ny fianakaviana manana ny marary mila ra iray.
Mitaky ny fitantanana mangarahara ireo mpiasan’ny CNTS, kanefa tsy vitsy koa ny mahafantatra sy afaka mijoro vavolombelona fa tena hanjakan’ny kolikoly ao amin’ity sampandraharaha ity. Ny maha samihafa azy amin’ny sampandraharaha be kolikoly hafa, na tsy te hiditra amin’izay aza, tsy maintsy mampandefitra ny hasorenana satria manana ny marary mila fitsaboana ireo mankao, ka mandadilady mihitsy.
“Handoavanao vola 30.000 Ar isaky ny paosin-dra iray ny ao, raha sanatria ka tsy mahita mpanome rà ara-potoana. Mody lazain’izy ireo fa mahita mpanome ra izy, ka omena an’ireo ny vola. Tsy izany anefa no miseho fa ny ra efa nomena maimaimpoana ihany no mihodina ao”, hoy kosa ny fanazavana iray. Efa misy firaisana tsikombakomba amin’ireo mpiasa sasantsany any amin’ny “service” isan-tsokajiny misy ny marary ihany koa izany.
Ankoatra ny vidin’ny paosin-dra, anisan’ny ahazoan’ireo mpiasa volabe koa ny fanaovana ny “phénotypage” maika, ka tsy mila rosia nandoavam-bola.
Araka izany, voatery ankolaka mandoa vola ny manana marary, satria raha vao tsy mahafeno ny isan’ny mpanolo ra ara-potoana, na koa tsy namandrika ra mialoha dia teny an’avona no azo. Sarotra anefa ny manemotra ny fandidiana, indrindra ho an’ireo marary mafy. Amin’izay fotoana izay, manatona mibitsika ny mpiasa iray hoe misy ihany ny azo atao fa izao ny sarany…
Hihaona amin’ny minisitra ireo mpiasa ao amin’ny CNTS
Nanambara ny mpitsabo mpitondra tenin’ny mpiasan’ny ivontoeram-pirenena misahana ny famindrana ra (CNTS) fa mitohy hatrany ny asan’izy ireo na eo aza ny fitakiana ataony. Momba ny hetsika, efa nandalo teny ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, ny profesora Andriamanarivo Lalatiana, omaly. Mbola hihaona eny amin’ny foiben-toeran’ny minisitera eny Ambohidahy izy ireo, anio, ka aorian’izay vao ho fantatra ny tohin’ny fitakiana samihafa. Anisan’ny angatahin’ireo mpanao fitakiana ny fialan’ny mpitantana voalohany ny CNTS noho ny tsy fisian’ny mangarahara eo amin’ny fitantanana.